Ncedisa iiFoto zakho! Amabinzana amafutshane afanelekileyo e-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yongeza imifanekiso yakho! Amabinzana amafutshane kwi-Instagram
NgoJanuwari 14, 2019 0 IiCententarios 1830
I-Instagram iye yaba yinethiwekhi yontlalontle ithandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje, isixa sempembelelo esifumaneke kuyo senze ukuba esi sicelo sibe Enye yeendlela eziphambili ukukhula inkampani okanye ivenkile online.
Yenza umxholo olungileyo kwi Instagram isekwe kumanqaku amabini abalulekileyo: ifoto elungileyo kunye nebinzana elilungileyo. Kungenxa yoko le nto ukuba uqala kwesi sicelo okanye ufuna ukwandisa inani labalandeli onabo, siza kukunika iingcebiso ukuze usebenzise ezona zilungileyo amabinzana amafutshane e-Instagram.
Kutheni usebenzisa izivakalisi ezifutshane?
Ibinzana elifutshane liya kukunika isitayile esifanelekileyo esifunwa ziifoto zakho, ezi amabinzana Unokwenza ireferensi ethile kumfanekiso oza kuwufaka. Unokwenza into yoqobo, uthathe ibinzana kwincwadi yakho oyithandayo, ingoma elungileyo okanye imbonakalo emfutshane yobuqu.
Kukho ezininzi amabinzana amafutshane onokuyisebenzisa ukubeka kuzo zonke izithuba ozenzayo. Eyona nto intle kakhulu kukuba zininzi izivakalisi ezimfutshane onokuzisebenzisa kwisizathu ngasinye, nokuba zingamabinzana othando, ubuhlobo, usizi, usapho okanye nokwenza ukuba abantu abakulandelayo bahleke.
Siza kukushiya kwimizekelo eliqela yezi zinto amabinzana ukuba uthathe njengereferensi kwaye ungazisebenzisa kwezinye zakho Izithuba ze-Instagram.
Amagama amafutshane othando kwi-Instagram
Asigwebi abantu esibathandayo
Ngamanye amaxesha intliziyo ibona okungabonakali ngamehlo
Apho kukho uthando kukho ubomi
Uthando lubunjwe ngumphefumlo ohlala kwimizimba emibini
Ubomi yintyatyambo yalunye uthando
Uthando alikho, alukho nokuba lubancinci, nokuba ndiziva ndithini na ecaleni kwakho
Uthando alunakuze luvuthwe
Amabinzana amafutshane obuhlobo
Umhlobo wabo bonke ngumhlobo wakhe
Umhlobo sisipho osinike ngokwakho
Ukuhamba nomhlobo ebumnyameni kungcono kunokuhamba wedwa ekukhanyeni
Umhlobo wokwenene ngulowo ekubambe ngesandla kwaye achukumise intliziyo yakho
Amaxesha amnandi kunye nabahlobo abathandayo bakha awona maxesha amangalisayo
Ubuhlobo buyiphinda kabini uvuyo kwaye bahlule iintlungu eziphakathi
Umhlobo ngumntu owazi yonke into ngawe kwaye usakuthanda
Amabinzana amafutshane okoyisa
Kukho indawo yokukhanya kuyo yonke ilifu lesiphango
Ukonwaba sisikhokelo, asiyondawo
Inkululeko soze inikwe; uyaphumelela
Inkululeko ayikho enye into ngaphandle kokuba lithuba lokuphucula
Umntu ukhululekile ngexesha anqwenela ukuba ngalo.
Naphi na apho uya khona, yiya ngentliziyo yakho yonke
Intyatyambo nganye ngumphefumlo ohluma kwindalo
Into engasibulali isenza somelele
Isibindi siyakwazi ukungoyiki
Apho kungekho kulwa akukho mkhosi
Iinkumbulo sisitshixo asikho sexesha elidlulileyo, kodwa sexesha elizayo
Eyona njongo iphambili yemfundo asisi lwazi kodwa sisenzo
Ukuba awunabagxeki, ngekhe uphumelele
Nguwe kuphela onokulawula ikamva lakho
Amabinzana amafutshane eengoma ezidumileyo
Hayi, masingakhali, ukuba ubomi yinyama yomtshato. UCelia Cruz
Ixesha lihamba liphupha elihamba ngathi sikhephe isikhephe - Shrimp
Namhlanje kufuneka sonwabe - Umfazi we-Oz
Ndiza kuhamba kwisibhakabhaka esingenaenkanyezi ngeli xesha, ndizama ukuqonda ukuba ngubani owenze isihogo separadesi - URosana
Ukuba bacula kabuhlungu kwaye basenza ukuba sikhale xa kungekho mntu usibonayo - UJoan Manuel Serrat
Xa omnye enxaniwe, kodwa amanzi awasondelanga. Xa umntu efuna ukusela, kodwa amanzi awasondelanga- Isiraphu yesiraphu
Isimbonono apho bekukhe kwakho isaqhwithi - Iintambo zokuThoma
Ukukhanya kukukhanya kuphela kwamehlo akhe - I-Barricadatones
Namhlanje uza koyisa isibhakabhaka ngaphandle kokujonga ukuba umhlaba uphakame kangakanani- Bebe
Enye yezinto osoloko uzigcina engqondweni xa kufikwa kolu hlobo lwamabinzana kukuba kufuneka uqiniseke ukuba unokunika umbono olungileyo kwifoto. Ngale nto, uninzi lwabalandeli onabo bayaqhubeka nokuchongwa kwaye bancede iprofayili yakho ukuba ithandwa kakhulu kwaye yaziwa.
Las amabinzana amafutshane e-Instagram Ziya kuhlala zikwayindlela entle yokuhamba nefoto nganye okanye iividiyo zakho. Khumbula ukuba ungasebenzisa amabinzana asekuqaleni akhoyo ngexesha lefoto. Uyilo kunye nobuchule yinto yonke emi ngaphandle kwinethiwekhi yoluntu enje.
Leliphi kula mabinzana olithandayo?
Unokuba nomdla leliphi elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram.
1 Kutheni usebenzisa izivakalisi ezifutshane?
1.1 Amagama amafutshane othando kwi-Instagram
1.2 Amabinzana amafutshane obuhlobo
1.3 Amabinzana amafutshane okoyisa
1.4 Amabinzana amafutshane eengoma ezidumileyo
1.5 Iingcebiso zokugqibela
NgoJanuwari 14, 2019
Indlela yokubuyela kwi-Instagram Amabali
Fumana apha amabinzana amahle e-Instagram evela kubahlobo!